Somaliliitto oo ka hortimid caruura dib loogu celiyo Soomaaliya -
Somaliliitto oo ka hortimid caruura dib loogu celiyo Soomaaliya
Oct 25, 2012 with: Commnets Tweet
Gudoomiyaha Somaliliitto Arshe Said ayaa kanaalka TV Nelonen siiyey wareysi ku saabsan dhalinyarada soomaaliyeed ee waalidiintooda dib ugu celiyaan dalkooda si qasab ah. Wuxuu gudoomiyaha sheegay inuusan ururka aragtidaan la qabin waalidiinta sidaas sameeya.
Safaarada Finland ee Addis Abeba ayaa sheegtay iney jiraan dhalinyaro da’yar ah iyo kuwa qaangaar ah oo waalidkooda dalkooda dib ugu celiyeen si sharci darro ah, kadibna ey lasoo xiriireen safaaradda Finland ku leedahay Ethiopia.
Wargeyska Helsingin Sanomat ayaa qoraal ka qoray gabadh soomaaliyeed oo Haliimo lagu magacaabo oo iyadoo 15 jir aheyd dib loogu celiyay Soomaaliya.
-Jaaliyada Somaliliitto dhacdadaan qaaska ah lama socota. Somaliliitto ma qabto fikirka ah in caruurta dalka dib loogu cesho, iyagoon ogoleyn. Soomaaliya amni buuxa kama jiro, mana qabno in dadka dib loogu cesho, ayuu yiri Arshe.
Dhanka kale Mukhtar Abib oo ah masuul ka shaqeeya sooshalka magaalada Helsinki kuna taqasusay waxtarka dhalinyarada ayaa sheegay in dhacdooyinka ey badnaayeen 1990:kii.
Tags: qaangaar • somaliliitto